सरकार र डा. केसी आ-आफ्नै अडानमा « Khabarhub
सरकार र डा. केसी आ-आफ्नै अडानमा
काठमाडाैं। संसदमा पेस भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन प्रक्रियामा सरकार र डा. गोविन्द केसी आआफ्नै अडानमा दृढ देखिएका छन्। केसीले सरकारले गरेको सम्झौताअनुरुप विधेयक कार्यान्वयन नभएसम्म अनशन जारी राख्ने बताएका छन्। ‘आफूसँग गरेको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा अनशन नत्याग्ने अडानमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ,’ स्थानीय संयोजनकर्ता धर्म गौतमले भने।
इलाम अस्पतालमा भर्ना भएका केसीको मुटुको चाल अनियमित देखिएको छ। कहिले ३५ र कहिले बढेर दुई सयसम्म पुग्ने गरेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बृजेन्द्रकुमार साहले जानकारी दिए।
मुटुको चाल अनियमित हुँदा आईसीयूमा राखेर उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ। तर, इलाम अस्पतालमा उक्त सेवा नहुँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू चिन्तित भएका छन्। केसीले उपचारार्थ इलाम जिल्लाबाहिर नजाने बताएका छन्। ‘इलामबाहिर किमार्थ जान्न भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ। संसदमा रहेको चिकित्सा विधेयक जति सक्यो छिटो अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दा नै उहाँको जीवनरक्षा हुन्छ,’ गौतमले भने। सरकारले भने केसीको सत्याग्रहलाई बेवास्ता गर्दै संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
प्रकाशित मिति : २ माघ २०७५, बुधबार ७ : ४८ बजे